Kuyaziwa ukuthi cishe zonke amantombazane ukukhothamela obubizayo. Amadayimane, igolide kanye emeralds ngcono nemizwelo futhi unike injabulo. Kodwa ummeleli eziningi zanamuhla isigamu enhle lwesintu uthanda engabizi, kodwa ngaphezulu imigexo yasekuqaleni futhi engavamile. Ngaphezu kwalokho, kuvamile ukuba izikhali eziningi amantombazane nabesifazane uthanda ukuhlobisa hhayi kuphela iminwe nezindlebe, kodwa futhi izinwele zakho.
Imihlobiso yasekuqaleni kakhulu zezinwele zabesifazane yilezo asebenzisa imishini yokukhulisa kanzashi. Lezi hairpins engavamile zihlobene izikopelo eside, okuyinto asetshenziselwa ukulungisa kanye umhlobiso zakudala zezinwele besifazane e-Japan lasendulo. Ukuze imikhiqizo efana wasebenzisa esiliva, lacquer, ukhuni, amagobolondo ezimfundu. abesifazane Modern, ukuthenga zokuhloba izinwele, okuyinto sisetshenziswa imishini kanzashi, bavame ukukhetha uhlobo Hana kanzashi. Kulesi clip izinwele esetshenziswa indwangu izimbali.
Into enzima kakhulu labo aye anquma ukuhlala kahle ukukhiqizwa kanzashi - funda indlela yokwengeza futhi zaschipyvat izingcezu indwangu, okumele jikisa amacembe. Izinto ezilandelayo futhi amathuluzi adingekayo womshini lezi izikhonkwane:
usilika noma satin Indwangu;
Ikhanya noma ikhandlela.
Ukudala izimbali kanzashi, makhosi, bavame ukusebenzisa amacembe ezimbili: babanjwa futhi esingunxantathu shape. Ukuze kukhiqizwe iyizingxenye oyindilinga kudingeka Indwangu izikwele 5 ngu 5 cm, okuyinto kufanele abeke etafuleni kangangokuba kungabikho muntu owake ekhoneni Ngaphakamisa amehlo, futhi ucezu owawufana rhombus equilateral. I-engeli phezulu kufanele bezama phansi, lapho calantsatfu engeli acute emaceleni. Badinga goba. Ngemva kwalokho, uthola idayimane elincane, okuyilona elidingekayo ukuze ujike ebusweni kude nani, bese-ke isidingo phakathi cindezela kwesokunxele namakhona kwesokudla. Umkhiqizo ke futhi waguquka kuye, futhi ithebhu linamathele iphini ukuthi ayibuyi. Khona-ke, nekhona elingezansi anqunywe nge sikelo kanye onomfutho ngemva podplavlen ngeke nomlilo kusukela amakhandlela noma umentshisi. Ngemva kokwazi kahle ubuchwepheshe Lobe, ungaqala ukwenza izimbali multi-tiered kanye ezimbili-tone.
abalandeli Abaningi isiko Japanese uyazi ukuthi imishini kanzashi, wasebenzisa womshini izikhonkwane engavamile, nokusiza ukudala ezihlukahlukene izimo, okuyinto zivumelana izikhathi ezahlukene zonyaka. Ngakho bona, ebhekisela amakhosi kanzashi ucelwa ukukhiqiza uhlobo oluthile ubucwebe ngabo. Ikakhulukazi ethandwa ebusika (Christmas), kanye entwasahlobo nasehlobo kanzashi. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi elicwengiweyo kakhulu futhi eyinkimbinkimbi kukhona ekwindla kanzashi, ngoba ukuhlobisa Chrysanthemum. Futhi le mbali nenhle amakhulu amaningi eminyaka, iwuphawu asebukhosini. A iphawule ngokukhethekile solemnity wale mikhiqizo unika inhlanganisela umbala shades obomvu nomhlophe.
Abaningi amakhosi lanamuhla, owenza kanzashi, uncamela bawahlobise njengoba kwakunjalo amakhosi Japanese. Ukuze wenze lokhu, kusukela tikwele letincane kasilika benza izimbali ezincane ngobuningi, okuyizinto look nenhle kakhulu futhi engavamile njengoba zezinwele umhlobiso zabesifazane. Abaningi omfisha, ezisetshenziswa imishini kanzashi zifane imisebenzi yangempela miniature yobuciko. Ngaphezu kwalokho, ukukhonza njengephayona umhlobiso, lezi barrettes futhi ukwenza umsebenzi obalulekile - ukuzisebenzisa kuba lula kakhulu isitayela izinwele ezinde e enhle mihlobiso curls. Kuyinto akukho ngozi kanzashi Japanese zithandwa kakhulu nge omakoti Russian.
Imifekethiso ku izingubo noma umlingo wama-cross-uthunge
Le filimu "Ukukhetha": ukubuyekezwa, waphonsa, sakhiwo
Banana ikhekhe nezinye zokupheka